Rahoviana ny Anabavy no Tokony Hisaron-doha? | Fitiavan’Andriamanitra
Rahoviana no Misaron-doha ary Nahoana?
Rahoviana ny vehivavy kristianina no mila misaron-doha, ary nahoana? Nahazo herin’ny fanahy masina ny apostoly Paoly mba hanoratra momba izany. Mila ny tari-dalana nomeny isika mba hahalalana izay tokony hatao, ka hanome voninahitra an’Andriamanitra. Misy zavatra telo tokony hoeritreretina, noresahin’i Paoly ao amin’ny 1 Korintianina 11:3-16: 1) Rehefa manao inona ny vehivavy no mila misaron-doha? 2) Aiza izy no tokony hisaron-doha? 3) Nahoana izy no mila misaron-doha?
Rehefa manao inona ny vehivavy no mila misaron-doha? Rehefa mivavaka sy maminany. (Andininy 4, 5) Miresaka amim-panajana amin’i Jehovah ny hoe mivavaka. Mampianatra fahamarinana ara-baiboly kosa no dikan’ny hoe maminany ankehitriny. Te hilaza àry ve i Paoly hoe mila misaron-doha foana ny vehivavy, isaky ny mivavaka na mampianatra Baiboly? Tsia. Miankina amin’ny toerana misy azy no anaovany an’ilay izy.
Aiza izy no tokony hisaron-doha? Eo anivon’ny fianakaviana sy ny fiangonana. Hoy i Paoly: ‘Ny lehilahy no lohan’ny vehivavy. Izay vehivavy rehetra mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha, dia mampahamenatra ny lohany.’ (Andininy 3, 5) Ny lehilahy no nataon’i Jehovah ho lohan’ny vehivavy eo anivon’ny fianakaviana. Hampahamenatra ny vadiny àry ny vehivavy, raha manao ny andraikitra nomen’i Jehovah ny lehilahy, nefa tsy mampiseho hoe manaiky ny fahefany. Raha voatery mampianatra Baiboly, ohatra, izy nefa eo ny vadiny, dia mila misaron-doha izy mba hampisehoana fa ekeny ny fahefany. Hisaron-doha izy, na vita batisa ilay vadiny na tsia, satria izy no loham-pianakaviana. * Hisaron-doha koa izy raha mivavaka na mampianatra, ka eo ny zanany lahy tsy ampy taona fa vita batisa. Tsy hoe noho izy io loham-pianakaviana anefa, fa satria rahalahy izy ary ny lehilahy vita batisa no nomena fahefana eo anivon’ny fiangonana.
Ary ny eo anivon’ny fiangonana? Hoy i Paoly: ‘Raha misy te hifanditra mba hanarahana fanao hafa, dia tsy manana fanao hafa izahay na ireo fiangonan’Andriamanitra.’ (Andininy 16) Ny lehilahy vita batisa no voatendry ho lohany eo anivon’ny fiangonana kristianina. (1 Timoty 2:11-14; Hebreo 13:17) Ny lehilahy ihany no tendrena ho anti-panahy sy mpanampy amin’ny fanompoana, mba hikarakara ny andian’ondrin’Andriamanitra. (Asan’ny Apostoly 20:28) Mety hasaina hanao ny andraikitry ny rahalahy mahafeno fepetra anefa ny vehivavy indraindray. Mety hasaina hitarika ny fivoriana alohan’ny fanompoana izy, ohatra, raha tsy misy rahalahy mahafeno fepetra manatrika eo. Mety hitarika fampianarana Baiboly any an-tranon’olona miaraka amin’ny rahalahy iray koa izy. * Hisaron-doha àry izy amin’izay, mba hampisehoana fa ekeny hoe andraikitra atokana ho an’ny lehilahy no ataony. Anisan’ny asan’ny fiangonana ihany mantsy ireo zavatra ireo.
Tsy voatery hisaron-doha anefa ny anabavy amin’ny toe-javatra maro, ohatra hoe rehefa mamaly any am-pivoriana, mitory isan-trano miaraka amin’ny vadiny na lehilahy hafa vita batisa, mampianatra ny zanany tsy vita batisa na mivavaka miaraka aminy. Afaka manao fikarohana bebe kokoa ny anabavy, raha manana fanontaniana hafa ka tsy azony antoka izay tokony hatao. * Raha mbola tsy hainy izay tokony hatao, ary mandrisika azy hanao saron-doha ny feon’ny fieritreretany, dia azony atao tsara izany araka ny asehon’ny sary.
Nahoana izy no mila misaron-doha? Hoy ny andininy faha-10: ‘[Tokony] hitondra marika eo amin’ny lohany ny vehivavy, dia mariky ny fanajana fahefana, noho ny amin’ny anjely.’ Misy antony roa voalaza eo. Voalohany, ho “mariky ny fanajana fahefana.” Rehefa misaron-doha ny vehivavy, dia mampiseho fa ekeny ny fahefana nomen’i Jehovah an’ireo lehilahy vita batisa eo anivon’ny fiangonana. Asehony amin’izany àry fa tia an’i Jehovah Andriamanitra sy tsy mivadika aminy izy. Faharoa, “noho ny amin’ny anjely.” Nahoana no hoe misy vokany eo amin’ireo zavaboary ara-panahy mahery ireo ny fanaovan’ny vehivavy saron-doha?
Mahasoa ny anjely ny mahita hoe ekena ny fahefan’i Jehovah ao amin’ny fandaminany, na any an-danitra izany, na etỳ an-tany. Mahasoa azy ireo koa ny mahita olombelona tsy lavorary manaiky an’io fahefana io. Mila manaiky ny fahefan’i Jehovah koa mantsy izy ireo, ary efa nisy anjely maro tsy nanao izany. (Joda 6) Hitan’ny anjely, ohatra, rehefa hoe misy anabavy manana traikefa sy nahita fianarana kokoa ary mahay kokoa noho ny rahalahy iray eo anivon’ny fiangonana, nefa manaiky tsara ny fahefany. Angamba Kristianina voahosotra mihitsy aza ilay anabavy, ary ho mpiray lova amin’i Kristy. Ho lasa ambony noho ny anjely izany vehivavy izany, sady hiara-manjaka amin’i Kristy any an-danitra. Tena modely ho an’ny anjely ny vehivavy toy izany! Voninahitra lehibe ho an’ny anabavy rehetra àry ny mampiseho amin’ireo anjely tsy mivadika an-tapitrisany, fa manetry tena sy mankatò izy, ka tsy mivadika sy manaiky an’ireo mitarika!
^ feh. 3 Tsy tokony hivavaka amin’ny feo avo, raha ny marina, ny anabavy, raha eo ny vadiny kristianina. Afaka manao an’izany anefa izy amin’ny toe-javatra maningana, toy ny hoe nisy aretina nahazo an’ilay vadiny ka lasa tsy afaka miteny izy.
^ feh. 1 Tsy mila misaron-doha ny anabavy iray mitarika fampianarana Baiboly amin’ny olona efa mianatra tsy tapaka, raha tsy vita batisa ilay lehilahy mpitory manatrika eo sady tsy vadin’ilay anabavy.
^ feh. 2 Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo Ny Tilikambo Fiambenana 15 Jolay 2002, pejy 26-27, sy ny 15 Septambra 1977, pejy 571-573.